Cola nguLana Del Rey - Izinto Zobugcisa
Ingoma inengoma yeengoma eziphikisanayo: 'Uthando lwam luthanda njengoPepsi-Cola.'
Umgca uvela kwinto athandana nayo uDel Rey waseScotland ngelo xesha, owayengumphathi weqela lomculo waseRcotland uKassidy Barrie-James O'Neill, wathi: 'Wayethetha ngamantombazana aseMelika, umbono wakhe wamantombazana aseMelika kukuba zonke iipussies zabo zazingcamla njengePepsi -Cola, kwaye ukuba babeliphupha elinje, utshilo Amatye agiqekayo . Ndacinga ukuba yeyona nto yayihlekisayo endakha ndayiva. Ndaye ndacinga, Kulungile… ndinomfana endithandana naye waseScotland, kwaye yile nto ayithethayo! '
Nangona ibizwa njenge 'Cola' xa kukhutshwa ngokusesikweni ifayile ye- IParadesi EP, le ngoma ibhaliswe kuMbutho waseMelika wabaQambi, aBabhali kunye nabaPapashi njenge 'Pussy.'
UDel Rey uxelele inkqubo kanomathotholo Isidlo sakusasa sivela LA ukuba wayengenamathandabuzo malunga nokukhupha ingoma, 'kodwa wonke umntu endandijikeleze naye wayenza. Bacinge nje ukuba kuyamangalisa ngokwenene - akukho nto intsha apha. '
U-Lana Del Rey uxelele i-MTV News kudliwanondlebe lwango-Novemba 2017 ukuba kulandela izityholo zokuhlaselwa ngokwesondo kunye nezityholo zeHarvey Weinstein kunye namanye amagama abalulekileyo kumzi mveliso wezolonwabo wagqiba kwelokuba athathe umhlala phantsi.
'Ndathi xa ndibhala le ngoma, ndicinga ukuba bendinohlobo lomlingiswa uHarvey Weinstein / uHarry Winston,' ucacisile. 'Ndicinge ukuba, njengobubele, idayimani yokubonelela ngeenkwenkwezi, njengeCitizen Kane okanye enye into. Andiqinisekanga ncam. Ndacinga ukuba kuyahlekisa ngelo xesha, kwaye kuyacaca ukuba ndiyakhathazeka ngoku. Ndiyabaxhasa abafazi abaze ngaphambili. Ndicinga ukuba banesibindi sokwenza loo nto. '
Ngaba ucinga ukuba ungcono xa uwedwa amazwi
ubungamehlo am xa ndingaboni
emva koko ndakujonga kunye nokulunga kwehlabathi kunye nam
Indlela yobomi yenombolo yesi-5 yokuhambelana
Uthando lwenombolo ye-666